Anjerimanontolo : Ny 60 isan-jaton’ny mpianatra mitsoaka an-daharana -
AccueilSosialyAnjerimanontolo : Ny 60 isan-jaton’ny mpianatra mitsoaka an-daharana
Anjerimanontolo : Ny 60 isan-jaton’ny mpianatra mitsoaka an-daharana
09/02/2018 admintriatra Sosialy 0
Ny 60 isan-jaton’ny mpianatra eny anivon’ny anjerimanontolo eny Ankatso no mitsoaka andaharana alohan’ny hidiran’ny amin’ny taona faharoa. Ao anatin’izay ihany, maro be ireo mpianatra no tsy mifanaraka amin’ny asa hiriany any aorianan’ny fianarana noratoviny ny asa ataony. Etsy ankilany indray, maherin’ny 3 hetsy ireo tanora mivoaka nahazo mari-pahaizana nefa tsy manana asa, araka ny antontan’isa avy amin’ny Instat. Ho fanampiana azy ireo, nikarakara andro ho an’ny torolalana ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena mba hahafantaran’ireo mpianatra eny amin’ny lisea ireo sampam-pianarana misy eny Ankatso. Mpianatra 900 avy amin’ny lisea 9 ato amin’ny faritra Analamanga no niatrika ny famelabelarana teny amin’ny oniversite Ankatso, omaly. Izay nahitana ny lisea Fenoarivo, Ampitatafika, Ivato, Ankadikely Ilafy, Ambohimanga Rova, Sabotsy Namahena, Ambohimanambola, Ambohidratrimo ary Imeritsiatosika.
Nampahafantarina ireo mmpianatra, ny fomba hidirana sy ireo sampam-pianarana 9 misy eny Ankatso arak’izay mifanandrify amin’ny asa hiriany any aoriana. Tanjona, mba tena hanana asa mendrika mifanaraka amin’ny fari-pahaizan’ny tanora Malagasy satria maro be ny manam-pahaizana saingy tsy mifanaraka amin’ny tsenan’ny asa. “Antony nanaovana ny andron’ny torolalana, ny fahitana fa tena tsy misy ny fifandrifian’ny fianarana na ny fiofanana sy ny filan’ny tsenan’ny asa. Misy ireo diso safidy ao anatin’ny fifidianana ny lalam-piofanana ka mahatonga azy ireo hiala andaharana. Na ihany koa, diso safidy izy ireo rehefa tonga eny amin’ny sehatra ny asa ka tsy ilay tena asa noeritreretina atao no ataony fa lasa izay asa tsy safidiny akory fa izay no mahavelona azy. Misy fiantraikany lehibe sy goavana izany ao anatin’ny toe-karena eto Madagasikara”, hoy ny talen’ny fampiofanana ankapobeny eny anivon’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, Raonivelo Hasina. Voalaza fa, fanombohana izao entina hanamboarana ireo zavatra tsy mety sy ny lesoka rehetra izay hita hatrizay, ary tafiditra ao anatin’ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana. Nahaliana ireo mpianatra tonga nanatrika teny ny famelabelarana. Marihina fa hitohy any amin’ny faritany teo aloha ny torolalana ho an’ny fahalalana izao.
Iny efa nigadra iny i Razaimamonjy Claudine ary samy mahalala ny rehetra fa ao Manjakandriana no iandrasany ny fotoam-pitsarana, ny fanontaniana mipetraka taorian’izay dia ny hoe foana ve ny kolikoly eo anivon’ny Fitsarana? Ary foana ...Tohiny